Azo atao ve ny misara-bady raha sendra olona tsy anjara?
Toe-javatra iray tsy eken’Andriamanitra mihitsy fisaraham-panambadiana. Rehefa nanam-bady ny olona iray dia tokony hizaka izay vokatry ny safidiny.
Tsy miraharaha ahy mihitsy ny sipako nefa izaho tia be azy.
Henoko fa misy vehivavy adalainy any am-pianarany any. Mijaly aho fa mba toroy hevitra.
Ahoana no hahafantarana fa anjara ny olona iray?
Araka ny efa voalaza tamin’ny torohevitra teo aloha dia tsy izay fanambadiana tanteraka rehetra no atao hoe : anjara. Indraindray dia mety ho vokatry ny safidin’ny olombelona no nahatanteraka ny fanambadiana ka mety tsy ho tomombana izany fa hisy ny fikorontanana.
Torohevitry ny mpitsabo hiatrehana hatsiaka
Efa ankatoky ny ririnina isika amin’izao fotoana izao, raha ny toetry ny andro no jerena. Indro ny torohevitry ny mpitsaboa amin’ny tokony atao mandritra io vanim-potoana io sy ho fisorohana ny mety hipoiran’ny aretina mifandraika amin’io vanim-potoana io.
Inona no sakafo mahangeza vetivety fa tena kely loatra aho ka mba te hitombo haingana ?
Sady ny tena mampalahelo ahy dia kianin’ny olon-tiako foana aho amin’ny hakeliko ary asainy manao “régime”.
Tsy izay fanambadiana tanteraka rehetra no atao hoe : anjara
Fanomezana avy amin’Andriamanitra ny vady. Araka ny efa voalaza tamin’ny torohevitra teo aloha dia tsy ny olona rehetra no nantsoin’Andriamanitra hanam-bady.
Voalahatra hatrany am-pahariana ve ny vady ?
Raha ny fomba namoronan’Andriamanitra ny olona dia tsy ny fanambadiana no tanjona voalohany eto ambonin’ny tany. Tsy mitovy mihitsy ny tso-drano nomen’Andriamanitra ny olombelona sy ny biby mikasika ny fanambadiana.
Tokony hofantarinao aloha ny ao anatin’ny sainy sy ny eritreriny mahakasika anao. Sao ilay miresaka aminao fotsiny no mahafinaritra azy, fa tsy manam-pitiavana anao izy. Raha toa ka tsy mifanojo ny fihetseham-ponareo dia, na manova ny fomba fitiavanao azy ianao, ka mandray azy ho namana fotsiny, na manapaka tanteraka ilay fifaneraserana an-telefaonina, raha tsy vitanao ny mandray azy ho namana. Raha toa kosa ka manam-pitiavana anao izy, na te hiaraka aminao, dia tokony ho fantatrao fa mety hiova ny fihetseham-po rehefa tena mifankahita ianareo. Tsy misy olona tena afaka ny milaza hoe : tia tanteraka mantsy, raha tsy efa mifankahita tava. Mety tsy hety aminao ny endriny, na ny fomba firesany, ny fihetsiny… Izy koa torak’izany. Ilaina, araka izany, ilay mifankahita amin’ny toerana azo antoka sy be olona, dia ho hita eo izay tohiny, fa aza mbola mametraka fanantenana be aminy aloha.
5 taona nivadiana izahay mivady ary manan-janaka 2. Herintaona nivadiana izahay no nanomboka nampirafy ahy izy ary tsy mety misaraka amin’ilay vehivavy mihitsy. Rehefa anontaniako azy anefa ny antony mahatonga azy hampirafy dia tsy mety hiteny amiko izy. In-dray mandeha fotsiny izy no nilaza hoe : tsy tonga lafatra hono aho.
Indraindray, mila mamerina ny lasa handinihina ny tsy nety rehetra sy ahafahana mamaha ny olana mipetraka amin’ny fiainana iainana ankehitriny ary hitsinjovana ny ho avy. Raha tsy hitanao irery ny mety ho olana dia andraso ilay fotoana mahatony anareo roa dia anontanio azy izay tsy mahafa-po azy eo amin’ny fiarahanareo, izay tsy tiany any aminao, izay zavatra iriany nefa mety lasa sakana amin’izany ianao… Lazao azy avy eo fa vonona ny hanampy azy hahatongavany amin’ny tanjona iriany ianao, vonona ny hanohana azy sy hanao izay hahasambatra azy. Apetraho aminy kosa anefa fa mila manohana anao koa izy ahafahanao mahatanteraka izany tsara. Zava-dehibe indrindra amin’izany ny fanajany anao, ny fanajanonany ny fampirafesana. Tokony handona ny fony izany raha tena mbola misy fitiavana ao anatiny. Rehefa tsy mampiraika azy izany dia efa izy mihitsy no tsy vonona hanao ezaka ka aza maka aretin’andoha aminy intsony fa atreho ny fiainanao, ataovy izay hahasambatra anao sy ny zanakao.
Noho ny elanelan-tany dia nisaraka izaho sy ny olon-tiako. Izy io anefa no niaraka tamiko voalohany. Marary be ny foko, malahelo azy foana aho. Ahoana no fomba anadinoako azy ?
Ovay tanteraka ny tontolo sy ny fombafomba nahazatra anao sy niarahanao tamin’io olona io. Raha toa ka misy hira fihainonareo dia aza mihaino izany intsony aloha, ny toerana falehanareo taloha raha mbola azo atao dia ivilio lalana. Fa indrindra indrindra, aza mieritreritra azy intsony ianao. Aza mamisavisa fiainana eo anilany izay tsy ho azonao tanterahina akory, fa tsy hahasitrana anao mihitsy izany. Fafao avokoa izany ny momba azy. Mila finiavana avy aminao koa anefa izany ary mila resy lahatra ianao fa tokony hanadino. Raha mbola kolokoloinao ao ilay fitiavana sy ilay fahatsiarovana dia tsy ho adinonao mihitsy izy, na ho aiza na ho aiza ianao.